Tamin’ny Aterineto No Nananganana ny Firaisankina Nanoloana Ny Voina Nitranga Tao Atsimon’i Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2013 4:16 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, English, Español, Português
[Amin'ny teny portiogey avokoa ny rohy rehetra ankoatra izay voalaza manokana]
Toy ny andavanandro ihany tao Porto Alegre tamin'ny alahady 27 janoary 2013. Tao akaikin'ny fokontany Vila Liberdade, ny fientanentanana amin'ny Fiadiana ny amboara amin'ny baolina fandaka Gaúcho (“Campeonato Gaúcho de Futebol”) no manintona ny Fanjakana Rio Grande do Sul (ao atsimon'i Brezila ary “gaúchos” no iantsoana ny mponina ao), raha manala azy vita famerenan-desona ireo mpianatra isan-karazany afaka tamin'ny fanadinana maro ao Santa Maria. Raha fehezina, tahaka ny mahazatra ihany ny fiandohan'ny taona, ary mizotra ho amin'ny tsaratsara kokoa. Saingy tanatin'izany andro alahady izany, ny voina ratsy indrindra nahazo ny Fanjakana Rio Grande do Sul no nanokatra ny vaovao an-tsary maro.
Tao an-tanànan'i Santa Maria, ny fahamaizan'ny trano fandihizana Kiss no namarana ny fiainana sy ny nofinofin'ny tanora mihoatra ny 230. Araka ny efa nolazain'ilay mpanao matoan-dahatsoratra Juremir Machado da Silva avy amin'ny gazety Correio do Povo dia : “Te-hanala azy fotsiny [ireo tanora ireo]“.
Taorian'ny fahatairana tao amin'ny gaúcho, nipatrapetraka haingana ny firaisan-kina.
Nampiasaina ny tambajotra sosialy hanangonam-baovao tamin'izay nitranga sy hitadiavana fanampiana ho an'ireo niharam-boina. Tsy ampy ny dokotera sy ny psikôlôgy, tsy ampy ny rano sy ny sakafo. Mila famindrana rà ny maratra.
Ny alatsinainy 28 janoary 2013, namoaka fanambarana tao amin'ny Facebook ny hopitaly Clínicas de Porto Alegre fa tsy mitady mpanolo-tena hanome ny rany intsony fa feno tao anatin'ny herinandro ny tahirin-drà tao aminy.
Manipika ny hopitaly Clínicas de Porto Alegre fa tsy mila fanomezan-drà intsony amin'ity alatsinainy ity. Olona an-jatony no nihetsika tanatin'ny firaisan-kina ho an'ireo niharam-boina tao Santa Maria ka ny andron'ny alatsinainy sy ny talata monja dia efa nihoatra ny 500 ny fanomezan-drà tao amin'ny fitehirizan-dràn'ny hopitaly. Mankasitraka tamin'ny fahafoizam-potoana nataon'ny rehetra ny hopitaly ary afa-miantehatra amin'ny fahalalaha-tsain'ny mpanome hifandamina mba hiverina indray any amin'ny fitehirizan-drà ao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Ity siokan'i Nathalia Guarezi (@naguarezi), tonian'ny bilaogy De Chaleira, ity dia anisan'ireo lahatsoratra mitady fanampiana hikarohana ireo tsy hita nanjavonana :
@luanamag nitady vonjy mba hikarohana ity tanora vavy hita ao anatin'ny lisitry ny maratra ao Santa Maria ity. http://facebook.com/faccoferreira. Ampiantsika izy hahita ilay tadiaviny!
Nihabetsaka ihany koa ny tati-baovao iraisampirenena momba ity toe-javatra ity. Nivoaka lohatenim-baovao lehibe tao amin'ny New York Times [en] izany tamin'ny 28 janoary 2013. Nilaza tao amin'ny Twitter ny lahatsoratra iray tao amin'ny New York Times momba ity toe-draharaha ity i Simon Romero (@viaSimonRomero), lehiben'ny biraon'ny New York Times ao Brezila tamin'ny 29 janoary.
Niresaka momba ny fitateram-baovao nataon'ny gazety lehibe momba ity raharaha ity ny Observatório de Imprensa, iray amin'ireo mpandalina ny fampitam-baovao breziliana, tamin'ny 28 janoary. Ho an'i Luciano Martins Costa, izay namoaka lahatsoratra momba ity raharaha ity [mitondra ny lohateny hoe “Ny horohoro sy ny fetran'ny fiteny”, “O horror e o o limite da linguagem“], “ny isan'[ny maty sy ny maratra] no nametraka ity toe-draharaha ity hahazo ny lanjan'ny voina, ny fitomboan'ireo kasinga izay mampitambesatra ny fiantraikan'ny toe-draharaha no niteraka ny fanafintohinana, fa raha amin'ireo ihany dia mbola lavitry ny fahazoana mahalala tsara ny halehiben'ilay toe-draharaha isika”.
Nanohy i Costa :
Niezaka ny hihoatra ny hendratrendratra tsapa tamin'ny voalohany ny gazety nivoaka alatsinainy (28/01), nefa izao indrindra ny fiteny mety hamaritana ny fetran'ny fomba fitantarana manokana : arakaraky ny hanakaikezan'ny voambolana sy ny sary kokoa ny marina no tsy hanekena azy.
Tanatin'ny afo ny fokontanin'i Vila Liberdade
Ny takarivan'ny alahady 27 janoary, raikitra ny fanairana tao amin'ny fokontanin'i Vila Liberdade, faritra avaratry ny tanànan'i Porto Alegre. Anjatony metatra manakaiky ny Kianjaben'i Grêmio notokanana vao haingana ny fokontany. Nifangarika tamin'ny fahantran'ny toerana ny rentirentin'ilay kianja. Araka ny nambaran'ny vavahadin-tserasera Sul 21, dia 90 amin'ireo trano 150 no levon'ny afo. 50 raha kely indrindra no rava tanteraka.
Vila Liberdade – Porto Alegre – 27/01/2013. Manakaiky ny 800 ny olona lasa tsy mana-kialofana. (CC BY-SA Overmundo)
Araka ny polisy sivily sy ny mponina ao an-toerana, dia avy amin'ny fifandiran'ny mpivady iray ao amin'ny fokontany no nahatonga ny afo. Toy izao ny fitantaran’ i Samir Oliveira tamin'i 29 janoary :
Iray amin'ireo mponina am-polony ao amin'ny fokontanin'i Vila Liberdade i Valéria izay mitsimpona avy ao amin'ny korontana navelan'ny fahamaizana (…) tanatin'ny poti-pitaratra, biriky vaky, vy miolana, fatin'ny vata fampangatsiahana ary ny sisan-davenon'ny kisoa, saka, akoho sy ny alika, no ikarohan'ny mponina izay zavatra tsy levon'ny afo.
Raha mbola miezaka ny hitatitra ity voina fanampiny tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy ity ny fampitam-baovao mahazatra, dia nihanaka haingana hamonjena ireo niharam-boinan'i Vila Liberdade ilay fanehoa-piraisankina tamin'izay nitranga tao Santa Maria. Ny Ampitso, nihamaro dia maro tao amin'ny aterineto, tanelanelan'ny fanoherana ny fananganana ilay kianja sy ny lonilony naterak'izany, ny fangatahana fitafiana sy sakafo.
Vila Liberdade, Porto Alegre. Ny fanangonana fanomezana ao amin'ny kianja mitafon'ny sekolin'i Giúdice (CC BY-SA Overmundo)
Vila liberdade : notontosaina tao amin'ny kianja mitafon'ny sekoly monisipalyAntônio Giúdice ny fandraisana sy ny fizarana fanomezana. Ny 2 febroary, nisy vondrona mpanolotena iray nankany Vila Liberdade handrakitra fanamarinam-pahaverezana ahafahana manampy ireo tra-boina taorian'ny fahamaizana. (CC BY-SA Overmundo)
Tsy hohadinoina mandrakizay io alahady io, sy ny firaisan-kina naseho tamin'izany.